Umlobi Rey Bredberi wagomela ngokuthi zabantu ababengakaze nesithakazelo ezincwadini, ubugebengu real. Lokhu kubuka neze uvumelana labo abakhetha izincwadi, ukubukela i-TV, baxoxe kwi-inthanethi, imidlalo. Kuyini ukusetshenziswa ekufundeni, yikulu kangangani? Yikuphi bancishwa abantu empilweni abangafuni ukuthola isikhathi izincwadi ezinhle, zakudala nezanamuhla?
Funda Sebenzisa: logic nememori
Denis Diderot wayevame ukuthi oyedwa dengwane izincwadi, ulahlekelwa ukucabanga. ngabe umfundi kulandela ukuthuthukiswa indaba umphenyi, noma ezweni eqanjiwe yonke - acabanga umlobi. Indoda Nomfazi uyalinga ukuzwisisa umcondvo lobalulekile umbhali, ihlangana ne imibono original, uthola ulwazi olusha. Konke lokhu kunomthelela ukuthuthukiswa ukucabanga okunengqondo.
Izinzuzo ukufunda izincwadi futhi ukuqinisa inkumbulo. Uzungu siqukethe ubuningi bemininingwane ngomzuzu. Ukuze uqonde ke umfundi kufanele akhumbule amagama abalingiswa, ngezici zazo, ukubukeka, senzo. Ukuvumela amanoveli, abaseshi, okuvusa usinga e izembozo ezithambile futhi kunzima ukuba ingxenye yezimpilo zabo, abantu baqaphela ukuthi ikhula ikhono lazo ngekhanda imininingwane edingekayo ekhaya nasemsebenzini.
Labo cha banake izitatimende mayelana nezinzuzo zokufunda, awazithathi incwadi, baphika bona ilungelo ukuthuthukiswa. Basuke "okuphekwe 'e umqondo ofanayo, imicabango, izinhlelo, enikeza ukudla kwengqondo inkumbulo ukuqeqeshwa.
Izincwadi ukuthuthukisa fantasy
ikhono lokusungula, emcabangweni - lezi "amathuluzi" kuzodingeka ukuba umuntu, kungakhathaliseki ukuthi umsebenzi angase uthanda. Dzhozef Konrad, okuqondene isigaba zabuna ezincwadi English, wagomela ngokuthi umbhali inikeza ingxenye kuphela incwadi. Yonke enye into appends abafundi, ebhekisela emcabangweni wakhe siqu. kwashiwo okufanayo mayelana nezinzuzo zokufunda unesizathu esihle.
Lo muntu ephendukile emakhasini ubuciko, bengazi obhula ezithombe kwenzekani ikhanda lami. Umfundi nje ongacabanga ukubukeka izinhlamvu futhi izingubo, kuyo ukuthi akuphi. Fantasia ekutshela iphunga, amazwi, imisindo. Nezinzuzo zokufunda akuyona ungaqiniseki, njengoba uthuthukisa ikhono lokusungula. Abantu lula ukubhekana nokukhumbula ekhuphuka nge imibono emisha ukuthi uzokufa kuthinte umsebenzi, ubudlelwano, izinga lempilo.
Ukufunda enyamalele ingqondo
Isifuba Phelps - umbhali wase-United States, iye wahlukanisa abafundi njalo ngezigaba ezimbili. Abamele iqembu lokuqala, ngokusho kwakhe, funda ukukhumbula. Laba nikwenza ukuze ukukhohlwa. Kuyini ukusetshenziswa ekufundeni izincwadi uma ulwazi ekhishwe ngokushesha ukuphuma engqondweni? Bantfu labanemakhono ukukhumbula ulwazi etholakale ngokusebenzisa izincwadi, ukwandisa khathizwe sakhe.
Izincwadi - liyinqolobane ezihlukahlukene ulwazi, kumayelana imisebenzi nakunoma yisiphi uhlobo. Funda izinzuzo wukuthi umuntu ejwayelene izenzakalo zomlando, funda amaqiniso ezithakazelisayo, anikezelwe amazwe angajwayelekile emadolobheni, ukuqonda kangcono abantu abahlala kuwo. Eqinisweni, eliphezulu inoveli kuba enye ngempumelelo ukuhamba.
Kuyini ukusetshenziswa ukufunda? Man abaduka eqanjiwe, akugcini kwenkululeko ukuphila eyodwa - nezakhe. Uzama ku isiphetho izinhlamvu ahlukahlukene ezazikhona ngokoqobo noma umbhali oqanjiwe. Unomuzwa imizwelo ukuthi uvuke izinhlamvu, ubuswa yabo nakho. Umfundi akusadingeki ukwenza amaphutha bebodwa, kungathatha izifundo kwabanye.
Izincwadi bafundiswa ukuxhumana
Descartes bathandile ukuqhathanisa kufundwa imisebenzi yobuciko kanye ingxoxo. Kulokhu, lo interlocutors umfundi, wathi, abantu bayiziphukuphuku esikhathini esidlule nawamanje umtshele kuphela imibono ebaluleke kakhulu. Nezinzuzo zokufunda akuyona nje ikhono lokufunda izinto ezintsha. Nge indoda uyakuthanda izincwadi, ezithakazelisayo ukukhuluma.
Ukufunda hhayi kuphela kwandisa izihloko okuxhumana. Shtudirovanie izincwadi kunomthelela kwetinhlavu amakhono inkulumo. bakukhonzile kalula liyabonakala by ikhono layo ukuze adlulisele imicabango ngamagama - kuyacaca futhi emuhle. Ngenxa amabhuku abantu beye bathuthuka kakhulu ngempumelelo ithalenta leticocwako. Plus - uthando ukufundwa Linomqondo wokukwazi ukuhlola isimo ukusuka esikhundleni omunye umuntu, ufinyeta eguquguqukayo, sinekhono uzwela.
Ukufunda - kukhethwa abafundile
UBenjamin Franklin njalo belulekwa abanye ichitha isikhathi esiningi izincwadi, kodwa ukuze abaphathe ngokukhetha. It is wafakazela ukuthi ukunwetshwa silulumagama, ikhono ukubhala ngokuphumelelayo neqhaza ngokuyinhloko imisebenzi zabuna ayibonwa. Eqinisweni, umfundi uthatha izifundo kusuka kubalobi engcono, ngenkuthalo obandakanya futhi ithuthukisa inkumbulo ezibukwayo.
izingcaphuno eziningi mayelana nezinzuzo zokufunda ezihlobene ulwazi olusha lembula ngco kulofundzako. Ngenxa amabhuku umuntu hhayi kuphela ekuqaleni ukubhala ukukhuluma ngendlela efanele, ukwakha imisho. Yena njalo ifunda amagama amasha, imiqondo, amagama. silulumagama sakhe kuba acebile kakhulu.
Izincwadi - ekuvimbeleni izifo
Lakho kanye wabelane nabangani engisondelene yomkhuba wawo washo izincwadi noma nini ekuphileni kwenzeke enkingeni. Uma ukholwa kuye wena, akukho ukudabuka, ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi lapho ngeke kusize nje kokuba incwadi enhle. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile imisebenzi yobuciko ziphakamisa ngendlela elula kuzo ezimweni eziphuthumayo.
Behlome ngezincwadi, izincwajana, wonke umuntu uyakwazi 'babekela eceleni "yabo yokuguga, ukuvimbela ukuthuthukiswa isifo i-Alzheimer, komqondo. Lena ithoni ngenxa, okuyinto ihlale ihambisana ubuchopho. Ngisho i-agumenti mayelana nezinzuzo zokufunda izitimela ingqondo, lokhu kusebenza futhi izinkinga okunengqondo ukuthi njalo uphosa kuze abafundi kujabulise nombhali umsebenzi. Ukuzindla - i ukushaja ngempumelelo ubuchopho, okuvumela ukuba ugweme ukwehla ezihlobene nokukhula amakhono engqondo.
Ukufunda kuthuthukisa ubuthongo
Iphumule - akuyona umphumela ezibalulekile kuphela eyaletha iwusizo kakhulu kwi umfundi. Uma ukholelwa ukuthi izifundo, imisebenzi yobuciko ukusiza abantu abaphethwe nokuqwasha, bayakhohlwa lezi zinkinga. Kuye kwanyatheliswa izincwadi ukufunda sokulala iba isiko ezimnandi, esiza umzimba ngokushesha uvula ubuthongo. Ngaphezu kwalokho, ngalesi sikhathi ulwazi etholakale is best lihlehlisiwe ikhanda.
Izincwadi neqhaza emakamu
Isigqi zokuphila kwanamuhla wukuthi izakhamuzi kwekhulu lama-21 awavamile akwazi ukugxila isenzakalo esisodwa. Indoda ezama ukusabalalisa ukunakwa phakathi umsebenzi, ukukhuluma ocingweni, sifuna ulwazi ku-inthanethi futhi ezihlukahlukene ezinye izinto. Ngenxa yalokho, cishe ubalekela ikhono lokuhlushwa lesifanele, okuyinto evame kunesidingo.
Ngo inqubo kokufunda abantu ukugxila indaba ngaphandle kokuphazamiseka ngo-Inthanethi kanye nezinye izinzuzo impucuko. Reader aqeqeshe ukuqapha, eqaphela imininingwane, okukhulunywe ngaye odlulayo umbhali. Trouble sokugxila ngokuphelele shabalala, kanjalo ngcono izinga lempilo ngesivinini imisebenzi yansuku zonke.
Ukufunda eba ukuzethemba
Cicero akazange ulihlanganisa ukubaluleka ukuba izincwadi, okuyinto Ungasingenisi abafundi injabulo. Nokho yokuchitha isizungu kuhlanganiswe ngokuphumelelayo okuqhubekayo. Odokotela bengqondo basekela ukumuncwa eqanjiwe kunoma yimuphi unyaka awulona ize. Izincwadi ngiyoba nethonya elihle ku-erudition yomfundi enikeza kuye ithemba okukhulu. Man uthola umbono wakhe siqu ezindabeni eziningi ngokwezihloko, uyakwazi ukunakekela ingxoxo, lapho ulwazi oluyisisekelo oludingekayo. Konke lokhu kuba umnikelo ekuqiniseni ukuzethemba.
Ngokuvamile, abafundi ukhule abantu abangabazali amabhuku ezandleni ingane, ekhuthaza isibonelo siqu. Umama nobaba akudingeki ukukhuluma sokuwa izinga lemfundo ezikoleni yesimanje futhi ingane yabo ukwenza bayakulangazelela ukufunda izincwadi.
Isihlahla isakhiwo: isikimu. Izici Sakhiwo sangaphandle esihlahleni
Asiatic Lion: incazelo, isithombe
Photoepilators ekhaya: yimuphi ongcono? Photoepilator ukusetshenziswa ekhaya
Isobho lezambathamba nama-meatballs: izici zokupheka, zokupheka nokubuyekeza